ONN LIVE:- ODUU AMMA Magaalaa Naqqamtee irraa QEERROON Magaallaa naqqamtee – Kichuu
HomeAfaan OromooTVONN LIVE:- ODUU AMMA Magaalaa Naqqamtee irraa QEERROON Magaallaa naqqamtee
ONN LIVE:- ODUU AMMA Magaalaa Naqqamtee irraa QEERROON Magaallaa naqqamtee Ummata keenya Anaa Saasigaa Irraa Ummata Gumuziin mannisaa gubatee fi buqqa’e fala argachuu qaba jechuun hiriira bahaanii motuummaa gafatanii, Fulbaana 30 2018
Hoggantootni biyya keenyaa,Aktiivistoonni keenya,Akkasumas Uummanni Oromoo godinaalee garaa garaa argaa kana,kun lubbuuma namaati bor waan jedhan ilaalla Gumuziin(Uummatni Beneshaangul)Gama wallaggaan Uummata keenya waan gochaa jirtu
Bakka Kaleessa Kufnetti Har’a Deebinee Kufuu Hinqabnu! (Maali jedhaa)???Amma dhuguma biyya bulchaa jirtuu obbo Addisu?
Kanaan dura dirreen dimokraasii biyya keenyaa dhiphachuu isaarraa kan ka’e qabsoo karaa nagaa geggeessuuf haalli mija’aan waan hinturreef jaarmiyaaleen siyaasaa garaa garaa ajandaa siyaasaa qabatan galmaan gahuuf qabsoo hidhannoo geggeessuuf dirqamanii socho’aa akka turan beekaamadha.
Wareegama dhalootni kaffaleen jijjiirama ji’ottan shanan darban keessatti mul’ataa jiruun mootummaan kutannoo ol’aanaadhaan tarkaanfiiwwan ciccimaa dirree dimokraasii bali’isuu fi aadaa siyaasaa jibbiinsaa fi walballeessuu kanaan dura ture hambisuu dandeessisan fudhataa jira. Jaarmiyaalee siyaasaa , miidiyaalee fi namoota dhuunfaa “shorokeessummaan” moggaafamanii turan moggasni sun ifatti akka irraa ka’uu godhuun bilisaan biyya isaanii keessaatti akka socho’an taasifamee jira. Hoggantootni paartiilee siyaasaa, akitivistootni fi gaazexessitootni mana hidhaa turan bilisa akka bahan taasifamee jira. Seerotni dimokraasii fi mirgoota namummaa ukkamsan akka haqaman ykn sakkataa’amanii fooyya’an kallattiin kaa’amee hojjetamaa jira. Jaarmiyaalee siyaasaa qabsoo hidhannoo geggeessuuf dirqamanii socho’aa turan gara qabsoo kara nagaa fi dimokraatawaa ta’eetti akka deebi’an mariiwwan milka’aa ta’an geggeeffaa turanii jiru. Adeemsa kanaanis jaarmiyaaleen siyaasaa ajandaawwan garaa garaa qabatanii socho’an hedduun (ABO dabalatee) gara biyyaatti deebi’anii qabsoo karaa nagaa fi dimokraatawaa geggeessuutti amananii sochii eegalanii jiru.
Tarkaffiiwwan gurguddoo dirree dimokraasii bal’isuuf fudhataman kana sirnaan yoo itti faayadamne eenyuun caalaa Oromoo kan fayyadudha. Tarkaanfiin fudhatamaa jiru siyaasa akka biyyaattis ta’e akka Oromootti geggeeffamu qabsoo karaa nagaa fi walfalmii yaadaa qofarratti hundaa’een akka geggeeffamu fi akka ammayaa’u taasisa. Sababa garaagarummaa ajandaa siyaasaatiin waljibbuu, wal hidhuu , wal ajjeesuun akka hafu haala mija’aa uuma. Walumaa galatti bilisummaa hawwaa turre nugonfachiisa jechuudha. Faallaa kanaa dhaabbana yoo ta’e garuu akkuma kaleessaa sana deebinee kufuu fi salphachuu dandeenyu dagatamuu hinqabu.
Oromoon seenaa isaa keessatti haala mija’aa qabsoo isaatiin yeroo ammaa uume kana kunuunsee itti fayyadamuun siyaasa isaa dimookraasii dhugaatti ceesisuuf tokkummaadhaan dhaabachuu qaba. Jaarmiyaaleen siyaasaa qabsoo hidhannoo geggeessaa turanisyeroo qabsoo karaa nagaatti deebi’uuf murteeffatan hatattamaan tooftaa qabsoo isaanii karaa nagaa fi nagaa qofatti ariitiidhaan naanneffachuu qabu. Waliigaltee qaama mootummaa waliin taasisan kabajuun humna waraanaa isaanii ariitiidhaan gara kaampii qophaa’eetti galchuuf dirqama qabu. Gama tokkoon qabsoo karaa nagaa geggeessuuf erga murteeffatanii booda karaa biraatiin ammo humni hidhatee bosona keessa socho’u jiraachuun irra hinjiraatu. Yaad rime bu’uuraa sirna mootummaa ammayyaa keessatti dhimmi ol’aantummaa seeraa kabajchiisuu fi meeshaa lee waraanaa to’achuu( state monopoly over means of violence) gahee mootummaa qofa akka ta’e sirriitti hubatamuu qaba.
Bakka kun hinta’initti humni cehumsa akka biyyatti taasisa jirru gufachiisuu barbaadu maqaa jaarmiyaa siyaasaatiin hidhatee socho’uu n hojii shiftummaa hojjechuuf, nageenya booressuun hawaasa dararuuf carraa argata. Kan tibbana argaa jirrus kanuma dhugoomsa. Akka hundi keenya beeknu Fulbaana 16/2011 tarkaanfii ajjeechaa humnootni maqaa WBOtiin hidhatanii socho’an godina W/lixaa keessatti hoggansa naannoo Beenishangul Gumuz Godina kamashii irraatti fudhatanii booda Oromoota naannoo Benishangul keessa nagaan jirataa turan kumaataan lakka’aman qe’ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa’anii gara gara Godina Wallaga Bahaa annaalee Saasiggaa, Limmuu, Limuu Haroo fi Diggaatti baqataa jiru.
Jaarmiyaaleen siyaasaa dhimmoota yeroodhaan raawwachuu qabnu raawwachuu dhabuudhaan, waldhaggeeffachuu dhabuudhaan qaawwaa fi dogoggoorota uumnuun ummatni keenya akka ajjefamuu, buqqa’uu fi mirgi isaa sarbamuu fi wareegama hinbarbaachifne kaffaluuf akka saaxilamu godhuu hinqabnu.
Yeroo ammaa kana Akka biyyattis ta’e akka naannoo Oromiyaatti ajandaa siyaasaa qabnu kamiyyu karaa nagaan tarkanfachiisuuf balballi bal’atee banamee jira waan ta’eef qabsoo hidhanno geggeessuufis wani nama dirqisiisu hinjiru. Oromoon garaa garummaa ajandaa siyaasaa karaa ammayyaa ta’een tarkaanfachiisuu dadhabee bakka kaleessa turetti deebi’ee akka walitti dhukaasu, akka wal ajjeesuu fi walhidhuutti deebi’ee salphinaa fi gabrumaa keessatti akka kufu gonkumaa hinbarbaadnu. Kanaaf, dubbii qaamotni maqaa WBOtiin hidhatanii Oromiyaa keessatti socho’aa jiran godhaa jiran obsaa fi bilchina ol’aanaadhaan ilaalaa jirra. Addi Bilisummaa Oromoos Waliigaltee irra gahame kabajee waraana isaa hidhatee socho’aa jiru ariitiidhaan gara kaampii qophaa’eetti akka galchu irra deebinee gaafanna. Humnootni WBOn alatti hidhatnii bakka addaa addaa keessatti socho’aa jiranis hidhannoo isaanii hiikanii jireenya idileetti akka deebi’an waamicha kabajaa goona. Fedhii siyaasaa kamiyyuu sochii karaa nagaa fi dimokratawaa ta’een keessumeessuuf kutannoo ol’aanaa qabnu irra deebinee ibsaa qaama humnaan socho’uun ummata keenya aarsaa hinbarbaachifneef saaxiluuf deemu irratti ol’aatummaa seeraa kabajchiisuuf dirqama akka mootummatti qabnus kan baanu ta’uu beeksifna. Ummatnis keenyas dogoggorootni akkasii akka sirra’anii fi qabsoon siyaasaa kana booda geggeeffamu karaa nagaa, dimokraatawaa fi ol’aantummaa seeraa kabajeen qofa akka ta’u gahee isa irraa eegamu akka bahu waamicha dabrsina!
ሰበር ዜና-አቶ ደመቀ መኮንን ከጉባኤ የቀረበውን ሀሳብ ተቀብለው በማእከላዊ ኮሚቴ አባልነት ለመቀጠል ተስማሙ